သင့်အားနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအမြှုပ်များဖြင့်ကျောပိုးအိတ်ကိုပုံဖော်ထားသည်. မီးခိုးရောင်ရင့်ရောင်ကတ္တီပါထည်သည်သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်. လွယ်ကူချောမွေ့သောလက်မောင်းပုံစံဒီဇိုင်းသည်မတူညီသောအမြင့်စားပွဲစားပွဲများနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်. ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုပိုမိုကြာရှည်စေရန်နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိုင်အခဲသစ်သားကုလားထိုင်အခြေစိုက်စခန်း.
သင့်အားနူးညံ့။ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆအမြှုပ်များဖြင့်ကျောပိုးအိတ်ကိုပုံသွင်းသည်. မီးခိုးရောင်ရင့်ရောင်ကတ္တီပါထည်သည်သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်. လွယ်ကူချောမောစေသောဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးကိုအမြင့်စားပွဲစားပွဲများနှင့်တွဲဖက်သင့်သည်. ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေပြီးဘက်ပေါင်းစုံသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိုင်အခဲသစ်သားကုလားထိုင်အခြေစိုက်စခန်း.
အမျိုးအစား: အိမ်သုံးပရိဘောဂ, ထမင်းစားခန်း, ဟိုတယ်ထမင်းစားခန်း
ပစ္စည်း: ကတ္တီပါအထည်; အစိုင်အခဲသစ်သား; အမြှုပ်
ထုတ်ကုန်အမည်: အစိုင်အခဲသစ်သားထမင်းစားခန်း; ထမင်းစားခန်း; ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကုလားထိုင်
function ကို: ထမင်းစားခန်း
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 79L ကို * 80W * 91 / 42H
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 81L ကို * 82W * 93H;
9~ 12: ယက်မဟုတ်သောအပြင်ဘက်အလွှာ.
က: ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ဆိုဖာထုတ်လုပ်နေကြသည်, ဆိုဖာအိပ်ယာ, မွေ့ရာ, လက္နာ, နှင့်ကုလားထိုင်များ.
က: ဟုတ်တယ်, ကျွန်ုပ်တို့တွင် Top grain သားရေကဲ့သို့သောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်ရန်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်, PVC, PU, သို့မဟုတ်ထည်.
က: ငါတို့သည်သင်တို့မှတိုက်ရိုက်ထည်သို့မဟုတ်သားရေနမူနာပို့နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ ODM ထုတ်ကုန်ပြီးနောက်နမူနာအခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါမည် 10 pcs အမှာစာနမူနာကြေးကိုပြန်ပေးမည်.